FAQ - Tianjin Poofey Hose Ngocingo Co., Ltd.
Izibopho Nge Yiphathe
Ukubeka izibopho Ne Injoloba
Heavy Duty izibopho
Amandla High izibopho
Non-perforated Worm-Drive izibopho
impethu drive izibopho-nge Welding
impethu drive izibopho-ngaphandle Welding
Worm perforated Drayivu izibopho
amanani ethu angaphansi ushintsho kuye ukunikezela nezinye izinto emakethe. Sizokuthumelela i Uhla lwamanani olusha ngemuva yakho yokuxhumana inkampani nathi ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa.
Ingabe unayo ubuningi ubuncane oda?
Maqondana nezibonelo, phambili isikhathi imayelana nezinsuku ezingu-7. Ukuze nokukhiqizwa kwezinto ngobuningi, phambili isikhathi izinsuku ezingu 20-30 ngemva kokwamukela inkokhelo idiphozi. Izikhathi phambili lizoba ngempumelelo uma (1) sesamukele imali yakho, futhi (2) siyamukeleka sakho sokugcina imikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu phambili azisebenzi umnqamulajuqu akho, sicela uye phezu nezidingo zakho nge ukudayiswa yakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukuze ifanelane nezidingo zakho. Ezimweni eziningi esikwazi ukwenza kanjalo.
Thina yesiqinisekiso izinto zethu futhi bewumsebenzi. Ukuzibophezela kwethu ukwaneliseka kwakho imikhiqizo yethu. Ngo incwadi egunyazayo noma kungenjalo, isiko inkampani yethu ikheli futhi uxazulule zonke izinkinga zamakhasimende baneliseke wonke umuntu
UFUNA UMSEBENZI UNATHI?
Ovundlile Guquguqula Ngocingo, Parallel Clamp, Sakaza Ikhebula Ngocingo, Metal Spring Ngocingo , Steel Pipe yokulungisa Coupling, Iron Hose Ngocingo,